Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Takumi Minamino hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eme Ihe Ugwu Na-adịghị Eke Ndụ
Ihe omuma anyi nke Takumi Minamino gosiputara ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezinulo ya, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka ibu, umuaka, ibi ndu, uru di na ndu nke onwe.
Na nkenke, anyị na-agwa gị akụkọ ihe mere eme nke ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara na Japan. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, ebe a bụ kredul ka ebili gallery - nchịkọta zuru oke nke Takumi Minamino's Bio.
Ndụ mbido na ịrị elu nke Takumi Minamino.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya, ihe ngosi nke mere ka o bilie n'okpuru dị ka onye zuru okè Jurgen Klopp ọkpụkpọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị anyị Takumi Minamino's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Takumi Minamino Childhood Akụkọ:
A mụrụ Takumi Minamino n'ụbọchị 16 nke Jenụwarị 1995 na ndị mụrụ ya n'obodo Izumisano ndị Japan. Datebọchị ọmụmụ ya dabara n'otu n'ime oge kachasị njọ maka ezinụlọ Takumi Minamino na ndị Japan niile. Ị maara?… Amụrụ Takumi Minamino ụbọchị abụọ ka ọ mụsịrị Nnukwu ala ọma jijiji Hanshin.
Dị ka a hụrụ n'okpuru, ala ọma jijiji Hanshin bụ ọdachi nkịtị nke gburu ndụ mmadụ 6,434 sitere na nzụlite dị iche iche, na mmebi nke ijeri yen iri ($ 100 ijeri), ihe dịka 2.5% nke GDP Japan n'oge ahụ.
A mụrụ Takumi Minamino ụbọchị abụọ ala ọma jijiji nke Great Hanshin nke Japan.
N'ịbụ onye a mụrụ nanị ụbọchị abụọ mgbe ọdachi na-emere onwe ya mere ka ndị mụrụ ya nwee obi ụtọ na mwute ọnụ. Mgbe amụrụ ya nke mere na ọnọdụ ịma jijiji, nne na nna Takumi Minamino nyere ya aha ya “Takumi”Nke putara; “Ringgagharị na Fruiting n'onwe ya“. N'ime oge niile Takumi Minamino, nne na nna ya chetaara ya mkpa ọ dị ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'aha ya. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, o kwuru n'otu oge na okwu ya;
“Mgbe m dị obere, ndị mụrụ m gwara m ka m ghara ịna-eme ihe aha m pụtara. Nke ahụ mere ka m kpebisie ike ịga nke ọma n'ihe m na-eme ".
Mata Ezinụlọ: Takumi Minamino nwere ezinụlọ ya sitere na agbụrụ Kinki nke Japan dị na Kansai Japanese mpaghara nke bi 11% nke ala mba ahụ.
Map a na-akọwa Takumi Minamino Ezinaụlọ ya na mgbọrọgwụ ya.
Onye ama ama nke ndị Japan si n'agbụrụ na-etiti ezinụlọ. Ndị mụrụ Takumi Minamino dị ka ọtụtụ ụmụ amaala nọ n'etiti ndị isi obodo Japan, na-enweghị obere agụmakwụkwọ ego. Ya na nwanne ya nwoke nke okenye aha ya bụ Kenta Minamino tolitere.
Ndụ mbu na football: Takumi Minamino yiri ka bọọlụ bidoro mgbe ọ bụ nwata. Dị ka nwatakịrị (afọ 1 ruo 3), ya na nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Kenta na-emekọ ihe. Onye nke atọ ahụ ga-eji ịnụ ọkụ n'obi kpoo bọọlụ ahụ n'ime ụlọ na ubi ezinụlọ ha. Ihe football niile mere na-atọ ụtọ na nna Minamino chere echiche banyere omume hụrụ ya ka ọ na-etinye Ọzụzụ Marker Cones n ’ezinụlọ na-eburu nza. Nke a nyeere ụmụ ya aka ịmụta otú e si eme drib, NA-AKWESTKWỌ AKWIRKWỌ IRBỌCH IN AH IN N’ỌB .R.
Takumi Minamino Mmụta na Ọrụ Buildup:
Ị maara?… Ọ bụ nwanne nwoke nke okenye Takumi Minamino setịpụrụ ụzọ nke ezinụlọ ga-aga nke ọma n'egwuregwu. Kenta nwanne ya nwoke duuru ihe atụ n'oge ọ sonyere otu egwuregwu bọọlụ Coober mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ elementrị. Inwe nwanne nwoke buru ibu nke ihe nlere anya, Takumi Minamino kwaliri isonye Coober Soccer mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ elementrị ya.
Mgbe ọ nọ na klas nke atọ ya, Minamino (Foto dị n'okpuru) wee banye na Zessel Kumatori FC. N'ụlọ akwụkwọ bọl, ọ zutere ma soro ezigbo enyi ya Sei Muroya na-egwuri egwu. Sei Muroya sokwa ụlọ akwụkwọ ọta akara na Minamino. OBIARA emesịa kpọkọtara ha abụọ ka ha hụrụ onwe ha na ndị otu egwuregwu mba Japan.
Mkpebi: N'afọ 2002 dị afọ 7, Takumi nwere ihe ndabara ikiri Ronaldo Luis Nazario de Lima, Ronaldinho, Rivaldo na ndị ọzọ na-ewu ewu na Brazil na Korea Japan 2002 World Cup. Egwuregwu ahụ mepụtara isi ọhụrụ na ndụ ya. O wetara ya mmụọ agụụ ọhụrụ, otu nke hụrụ ya ka ọ na-ekwe nkwa ịbanye n’egwuregwu ọkachamara.
Takumi Minamino Childhood - Ndụ Ndụ Mmalite:
Na mkpa ịhọrọ nhọrọ n'etiti ụlọ akwụkwọ na football, Takumi Minamimo's Ndị nne na nna kwekọrịtara na ọnọdụ ọ gaghị emebi agụmakwụkwọ ya kpamkpam maka egwuregwu ahụ. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ elementrị, Minano nwetara nchebe na Kokugoku Onye ntorobịa ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Mgbe ọ na-egwu bọl n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ndị Cerezo Osaka gbara bọọlụ bụ onye kpọrọ ya oku na U-15 nke o ji agba efe efefe. Dịka a hụrụ n'okpuru, o nwere ezigbo mmalite ịmalite ndụ na klọb.
Takumi Minamino malitere imebi ọgba aghara megide ndị iro ya site n'oge ọ bụ nwata.
Takumi Minamino na asọmpi egwuregwu mbụ ya na Cerezo Osaka bịara mgbe ọ sonyere na U-15 niile Japan Club Youth Soccer Championship. O nwuru dị ka onye kachasị goolu na asọmpi ahụ na ihe mgbaru ọsọ 8. Na 2010, ndị na-agba ọsọ bọọlụ sonyere na Asia-Championship (AFC) U-16 Championship ebe ọ ghọkwara onye kachasị asọmpi asọmpi.
Takumi Minamino nọchitere obodo ya na Championship dịka nwatakịrị.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, kpakpando ndị Japan weghaara football dị ka ọrụ oge ya niile, na-ahapụ ịga mahadum. Minamino kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya na 2012 mgbe ọ gbagburu klọb maka afọ 6 (n'etiti 2007 ruo 2012).
Takumi Minamino Biography Eziokwu - tozọ A Maara Aha:
Takumi Minamino bidoro ọrụ ya dị elu na ndetu ọma ya na Njikọ Ndị Ntorobịa Japan. Ị maara?… Omume ya mere ka ọ bụrụ onye ntorobịa kachasị mma nke egwuregwu na afọ mbụ ya. Ọ kwụsịghị ebe ahụ, Minamino tinyekwara onyinye onyinye egwuregwu ndị Japan.
Imeri ihe nrite ndị a nwere ike ịbịa mgbe ịnwere onye ndụmọdụ na akụkọ dị ka onye ị na-egwuri egwu. Ị maara?… A na-asọpụrụ Minamino na-egwu n'akụkụ akụkọ ifo Diego Forlan n'oge ọ bụ nwata. Ha abụọ kere ezigbo mmekọrịta dị egwu.
Takumi Minamino na-egwuri egwu n'akụkọ ihe mere eme na Uruguay na Goal Scoring Machine- Diego Forlan.
O weere ohere buru ibu: Takumi Minamino kasịnụ ogbo ya ka ọ na-enwu mgbe ọ na-egwu egwu Shinji Kagawa's Manchester United mere na July 2013.
Ị maara?… Ọ gbatara ndị ahụ EGO SUPER nke ahụ nyeere ndị otu ya aka imeri United (2-1). Takumi Minamino ji egwuregwu megide United iji kpọsaa onwe ya na Europe, mmepe nke hụrụ nnukwu klọb na-ama ya. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi vidiyo nke SUPER GOAL megide United.
Ihe ịga nke ọma Minamino akwụsịghị ebe ahụ. Inyere mmeri United sochiri ya inweta MVP na Nuti Food Cup 2014 asọmpi. N’etiti ndị klọb Europe niile rịọrọ arịrịọ maka mbinye aka ya, ọ bụ FC Red Bull Salzburg nke meriri. Klọb bịanyere aka na Minamino na 7th nke January 2015.
Takumi Minamino Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Takumi Minamino bidoro ndụ Europe na ndetu ọma. N'ime oge izizi ya (2017-18), o nyeere Salzburg aka na Europe kachasị mma ha. Mara ọkwa ya dị ala na Njikọ ndị Austrian na-enweghị mmasị, Takumi Minamino jiri UEFA Europa League dị ka ọkwa kachasị mma iji gosipụta uru ọ bara.
Atụmatụ egwuregwu ahụ zuru oke. Nke mbụ, o nyeere ndị otu ya aka ka ha tie Borussia Dortmund, na-eduga na klọbbụ egwuregwu mbụ na UEFA Europa League nke ikpeazụ. Mgbe ahụ ghọrọ onye na-emeghe anya UEFA Champions League nke oge 2019 2020 nke hụrụ izu oke nke atụmatụ Minamino ya.
Minamino nyeere Salzburg aka inwe mkpọsa Europe kachasị mma na oge 2019 /2020. Ya na igwe ihe mgbaru ọsọ ibe Erling Braut Haland gosipụtara na ha bụ isi ọchịchịrị gbara ọchịchịrị n'asọmpi Europe. Minamino nwere anya na-enwu enyo ka ọ na-asọ mpi megide Reds na Anfield na ntuli aka Champions League nke 2019/2020.
Takumi Minamino ghọrọ onye ndu nzuzo megide Liverpool na Njikọ Njikọ.
Inwe ekele maka Jurgen Klopp, ndị Liverpool ya, na ọbụlagodi ndị Liverpool ahụghị ndị amụrụ ka ha dara ozugbo anwansi anwansi nke Minamino. Vidio dị n'okpuru ebe a na-achịkọta ọnụ ọgụgụ meteoric ya ịbụ onye a ma ama. Jurgen Klopp si mmeghachi omume na Ngosipụta anwansi nke Minamino dị ka egosiri n'okpuru bụ n'ezie ihe enweghị ọnụ ahịa.
N'ụzọ tụrụ ndị egwuregwu bọọlụ n'anya karịsịa ndị Japan na ndị na-akwado Liverpool, Jurgen Klopp n’ikpeazụ merie n’ọsọ ahụ maka mbinye aka ya. Ka m na-emelite Bio ya, Ebumnuche nke ndị bọọlụ ewetala ya ihe mgbaru ọsọ Premier League nke mbụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Takumi Minamino Mmekọrịta Ndụ:
Site na mmụba ya na mmụba na asọmpi Champions League nke 2019/2020 ma sonye na Liverpool, o doro anya na ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ ndị England na-atụgharị uche ma ọ bụrụ na Takumi Minamino nwere enyi nwanyị ma ọ bụ ọ lụọla n'ezie.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na mma ya mara mma agaghị etinye ya na ndepụta nke ndị enyi nwanyị na ụmụ nwanyị ndị nwere mmasị maka obi ya. Agbanyeghị, n'azụ ndị egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma nke dịka ọtụtụ ndị na-ede blọgụ Japan si akpọ aha queen. N'okpuru ebe a bụ foto pụrụ iche nke Takumi Minamino na enyi nwanyị ya queen dika ha huru n'anya.
Dị ka asịrị, mmekọrịta Takumi Minamino na queen malitere mgbe ya na enyi ya nwanyị nkebu aha ya 'malitere.Shiori'.
Takumi Minamino Ndụ Nke Onwe:
Tomata ihe omuma nke Takumi Minamino site na mmemme football ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị àgwà ya pụrụ iche.
Takumi Minamino Ndụ nke Onwe gị pụọ na football.
Malite, Minamino nwere ọ ofụ n'ego na mpụga egwuregwu. Ya iỌ na-eme ọfụma ma nwee mmasị ịnọnyere ndị enyi na ezinụlọ, karịchaa ndị nwere ụdị ezinụlọ sitere na ya. Na mmekorita ya na ndi enyi, tnke a bụ ngosipụta nke “eze nke oke ọhịa”Ọnọdụ na ọrụ ego. Nke Minamimo Ahụhụ ịkpa ọchị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Nke a bụ ihe mere eji hụ Japanese n'anya ma n'ụlọ ma mba ọzọ.
Tomata Takumi Minamino Ndụ nke Onwe ya pụọ ​​na bọọlụ.
Takumi Minamino Ndụ Ezinụlọ:
N'ime oge a, anyị ewetara gị ụma karịa gbasara ndị otu Takumi Minamino sitere na nne na nna ya.
More banyere Papa Takumi Minamino: Ihe omuma banyere ibu nna onye tọgbọrọ ntọala maka ọrụ nwa ya nwoke nke ndị mgbasa ozi na-edeghị. Agbanyeghị, ekwenyela na papa Minamono dị afọ 55 n'oge edere. Papa m onye chiri ya bụ maka ịlele egwuregwu ọ bụla nwa ya nwoke na-egwu ma ka na-enye ya ndụmọdụ mgbe egwuregwu gasịrị. Dịka ụzọ isi nọgide na-enwe ezi mmekọrịta, nna na nwa nwoke ka na-aga ekiri bọọlụ ọnụ.
More banyere nne mama Takumi Minamino: Enweghị ọtụtụ akụkọ gbasara nne Takuma Minamino. Agbanyeghị, anyị maara na ọ bụ ezigbo onye nlereanya na onye mbụ Minamino mara. Agbanyeghị, ozi dị na mama mama Takuma Minamino bụ ọrụ maka iji ụgbọ ala buru ya oge ọ bụla ọ kwụsịrị ịgba bọl.
More banyere umimụnne Takumi Minamino:: Na ikpe site na nyocha kpụ ọkụ n'ọnụ emere, ọ dị ka Takumi Minamino enweghị nwanne nwanyị. Anyị enwetabeghị ozi ọ bụla gbasara nwanne nna ya ma ọ bụ nwanne mama ya nwanyị. Otú ọ dị, o nwere nwanne nwoke tọrọ ya aha ya bụ Kenta na ụmụnne nwoke abụọ ndị ọzọ amachaghị banyere ha.
Takumi Minamino nwanne Kanta dị afọ 3 karịa ya pụtara na ọ bụ 27 n'oge ederede. Minamino kwadoro nwanne ya nwoke maka ime ka ọ ghara ịhapụ mmasị na football. N'ụzọ dị mwute, Kenta, n'adịghị ka obere nwanne ya nwoke emeghị onwe ya ka ọ bụrụ onye a ma ama na football. Ọ kwụsịrị egwuregwu ahụ na March 2010 n'ihi amaghị ihe.
Ndụ Takumi Minamino:
Dabere na Express Egwuregwu, Takgwọ Takumi Minamino nke £ 2.5m kwa afọ nwere ike gbadaa na £ 48,000 kwa izu maka ụgwọ ọrụ. Ndị a bụ ọnụ ọgụgụ ya maka Red Bull Salzburg nke mewororịị mụbara mgbe ọ sonyere Liverpool.
Ọbụna na ị na-akpata ọtụtụ ego bụ ihe dị mkpa, Takumi Manamino bụ ihe na-enye ume ọhụrụ maka ndụ dị oke ọnụ. N'oge edere, ọ hụghị onwe ya ka ọ na-ebi ụdị ndụ ọpụrụiche nke ụgbọ ala na-egbu maramara na ụlọ ndị ọzọ na-ahụkarị.
Umizọ ndụ Takumi Minamino. Ebe E Si Nweta Foto: Liverpool, ExpressUK na Gym4u
Minamino na-ebi ụdị ndụ dị ala, nke na-eme ka ọ ghara imefu ego ezighi ezi na ijigide mkpa bara uru na-agaghị efu nnukwu ego.
Takumi Minamino Eziokwu Eziokwu:
Ihe njide Guinness World: Dabere na blog nke ọma nke Japan, Takumi Minamino bụ onye njide ihe Guinness kemgbe ụbọchị ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ị maara?… O nwere oge Guinness ndekọ maka "Otu nkeji nke mmetụ aka dị elu na-aga n'ihu".
Ọ jụrụ aha Nickname ya: Afọ ole na ole gara aga tupu ama ama ya, Minamino kwuru ihe masịrị ya n'otu oge ọ na-ekwu okwu 'Japan Neymar'aha otutu. N'oge ahụ, ọ dịghị mgbe ọ nakweere aha aha ahụ na-azọrọ na ọ dịghị mma. Minamino kwuru otu oge na nyochaa Red Bull Salzburg webụsaịtị;
“Achọghị m iji onwe m atụnyere Neymar ma ọlị. Ọ bụrụ na m ga-enwe ike iji nweta ihe ọma dị ka ọ bụ, mgbe ahụ, m ga-eji obi ụtọ na-anabata m aha otutu ”.
Kadịnal butere ezigbo enyi ya: Dị ka m kwuru na mbụ n'isiokwu a, Takumi Minamino na Sei Muroya bụ ezigbo ndị enyi bụ ndị zutere mgbe ha na-agba bọọlụ n'oge a na-agba akwụkwọ. Ha abụọ jere ụzọ dị mma n'ụzọ njem ha. Ha abụọ mechara bụrụ nke ọma ma bụrụkwa ihe ebube ga-ejikọta ha ọzọ, n'oge a na Egwuregwu Olympics nke Rio de Janeiro mgbe ha na-anọchite anya obodo ha hụrụ n'anya Japan.
Takumi Minamino na Sei Muroya bụ ezigbo ndị enyi kachasị na nwata bụ ndị gbakọtara bọọlụ mgbe ha nọ na Kindergarten.
Obi abụọ adịghị ya, ụwa ahụla ole na ole n'ime nzukọ ọmụmụ ọdịnihu ụmụaka a na ọkwa mba. Ezigbo ezigbo ihe atụ nke anyị maara bụ n'etiti Nkume Mason na Chora Ohia.
Takumi Minamino Okpukpe: Dị ka ọtụtụ ndị Japan, ọ ga-abụ na nne na nna Takumi Minamino zụlitere ya Shinto okpukpe Budto. Agbanyeghị, ihe ndị na-anọghị na foto nke ihe omume okpukpe ya emeela ka anyị na-atụ aro na ọ nwekwara ike ịbụ onye ekweghị na Chineke.
Takuma Minamino Tattoo Eziokwu: Omenala igbu egbugbu ama ama nke ukwuu n’ụwa bọọlụ taa n’ihi na a na-ejikarị ya egosipụta okpukpe mmadụ ma ọ bụ ndị ha hụrụ n’anya. Minamino n'oge ederede adịghị egbu egbu. Dika edere ya n’okpuru, odighi isi na ahu elu ya na ala ya.
Takumi Minamino adịghị egbu egbu.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Takumi Minamino Childhood Story Plus Uzo nke Utold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanweela: Machị 20, 2021